ADEEGYADA | Hsao2
Ururka Maamulka Adeegyada Aadamiga (HSAO) waa barnaamij isuduwid adeeg oo la wanaajiyey kaas oo la shaqeeya Allegheny County halista ugu badan ee carruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweyn. HSAO cunugga / dhallin-yarada iyo barnaamijyada iskuduwidda adeegga dadka waaweyn waxaa loo sameeyay inay buuxiyaan baahiyaha iyo baahiyada gaarka ah ee shakhsiyaadka ka diiwaangashan barnaamij kasta. Himiladeena koowaad waa inaan ku xirno shaqsiyaadka iyo qoysaska adeegyada ay ugu baahan yihiin kor loogu qaado tayada noloshooda.
Adeegyadeena shaqsiyadeed waxay ku dhismaan shaqsiyaadka, qoyska, iyo awooda bulshada waxayna aqoonsadaan midnimada shaqsiyaadka. Hay'addeenu waxay taageertaa macaamiisha wadata adeegga, adeegyada ku wajahan qoyska waxayna soo dhaweynayaan falsafada in macaamiishu ay yihiin shakhsiyaad adkeysi leh "awood u yeelan kara oo sameyn kara" soo kabashada. Ujeeddada HSAO waa in la hubiyo in adeegyada caafimaadka hab dhaqanka la gaarsiiyo deegaanka ugu yar ee xakameysan isla markaana ay xasaasi u yihiin dhaqanka macmiilka iyo qoyska. Isuduwidda Adeeg waxaa la siiyaa hanaan hal abuur leh oo is beddel leh oo dhiirrigelisa madax-bannaanida, isku filnaanshaha, iyo aqoonsiga taageerada dabiiciga ah ee loogu talagalay macaamilka iyo qoyskooda.
Awood siinta shakhsiyaadka iyada oo loo marayo isuduwidda adeegga shaqsiyeed iyo taabogal ah, waxaan ku dadaalnaa in aan siinno macaamiisheenna iyo qoysaskooda rajeynaya in noloshoodu ay sii fiicnaan doonto. Si fudud ayaa loo dhigaa, waxaan buundada u xiraynaa berrito ifaya!
Adeegyada Dadka Waaweyn
Adeegyada Carruurta / Dhallin-yarada